စီးပွားရေးစိတ်ကူးတစ်ခုအတွက် ဈေးကွက်ရှိမရှိ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။ – Gentleman Magazine
စီးပွားရေးစိတ်ကူးတစ်ခုအတွက် ဈေးကွက်ရှိမရှိ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။
စီးပှားရေးစိတျကူးတဈခုအတှကျ ဈေးကှကျရှိမရှိ ဘယျလိုဆုံးဖွတျမလဲ။
သင့်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု လုပ်ဆောင်ဖို့ စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခု ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ဒီစိတ်ကူးကလည်း သုံးစွဲသူတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးကို ဆွဲဆောင်နိုင်ရုံသာမက အိတ်ထဲကပိုက်ဆံတွေကို ထုတ်သုံးချင်စိတ်ပေါ်လာလောက်အောင် ကောင်းနေပြီ။ ဘယ်သူမှ မပေးသေးတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း သုံးစွဲသူတွေကြားထဲမှာ လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေမယ် ဆိုရင် ဒါဟာ သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းပါပဲ။ တုံ့ဆိုင်းမနေပါနဲ့၊ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ချလိုက်ပါ။
ဒါပေမယ့် စဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းကို စတင်တည်ထောင်ဖို့ မကြိုးစားခင်မှာ သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန် ဒါမှမဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုအတွက် ဈေးကွက်ရှိမရှိဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဈေးကွက်ထဲမှာ နေရာရဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်း သေချာသိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအတွက် ဈေးကွက်သုတေသနလုပ်ဆောင်ဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အများစုက ထုတ်ကုန် ဒါမှမဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့အခါမှာ ဒီအဆင့်ကို လစ်လျူရှုထားတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်၊ ၀န်ဆောင်မှုက အကောင်းဆုံးဖြစ်နေပြီလို့ ယူဆထားတတ်ကြပြီး မကောင်းမြင် ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကို လက်ခံချင်တတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကျတော့လည်း ဈေးကွက်သုတေသနလုပ်ရတာက အကုန်အကျများမှာကို စိုးရိမ်ပြီး မလုပ်ပဲ နေတတ်ကြပါတယ်။ လုပ်ငန်းစတင်တည်ထောင်ရာမှာ ကုန်ကျမယ့် အခြားကုန်ကျစရိတ်တွေလည်းရှိတဲ့အတွက် ဈေးကွက်သုတေသနလုပ်ဖို့ကို လစ်လျူရှုတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဈေးကွက်သုတေသနလုပ်ဆောင်မှုကို အနာဂတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ထုတ်ကုန်၊ ၀န်ဆောင်မှုကို သုတေသနရလဒ်နဲ့အညီ ထိန်းညှိလုပ်ဆောင်ခြင်းက ရေရှည်မှာ ငွေကြေးချွေတာပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဈေးကွက် သုတေသန ဆိုတာက ဘာလဲ ? လွယ်လွယ်ပြောရရင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ ဈေးကွက်ပြဿနာတွေကို ရှောင်ရှား၊ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ စုစည်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်သုတေသနကောင်းတစ်ခုက အလုပ်ဖြစ်စေနိုင်မယ့် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုရေးဆွဲနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာ သင်ရည်ရွယ်ဖြန့်ဖြူးချင်တဲ့ အပိုင်းတွေကို အတိအကျသိရှိလာဖို့နဲ့ သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်၊ ၀န်ဆောင်မှုက ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ပုံရိပ်ဖန်တီးနိုင်ဖို့ကိုလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအသစ်စက်စက်လေးကို စတင်အခြေစိုက်တည်ထောင်ဖို့ နေရာကောင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့လည်း ကူညီပေးပါတယ်။
ဒီတော့ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ဈေးကွက် ဆန်းစစ်မှုလုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင် အောက်ပါအချက်တွေကို သိလာမှ ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
၁။ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုကို ဆန်းစစ်ပြီဆိုရင် နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ချေတွေ၊ အပြောင်းအလဲတွေကို ရှာဖွေပါ။ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အတွင်းက စာရင်းဇယားတွေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရဲ့ ဘယ်အပိုင်းက ဖွံ့ဖြိုးလာနေပြီး ဘယ်အပိုင်းက ကျဆင်းနေလဲဆိုတာကို ကြည့်ပါ။ သုံးစွဲသူ ပုံစံသစ်တွေ ရှိနေပြီလား၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေက ဘာတွေလဲ၊ ဘယ်လို အသုံးချနိုင်မလဲ၊ သင်လုပ်ဆောင်မယ့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်က တိုးတက်မှုကျဆင်းနေလို့တော့ မဖြစ်ပါဘူး။
၂။ သုံးစွဲသူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
သုံးစွဲသူနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ သင့်ရဲ့ဈေးကွက်သုတေသနကို ဈေးကွက်စစ်တမ်းနဲ့ အစပြုသင့်ပါတယ်။ စေ့စပ်သေချာတဲ့ ဈေးကွက်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုက လုပ်ငန်းအသစ်တွေအတွက် အရောင်းပိုင်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဈေးကွက်စစ်တမ်းကောက်ယူဖို့အတွက် သင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ဈေးကွက်အတွက် ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ နယ်နိမိတ်တွေသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကန့်သတ်နယ်မြေအတွင်းက သုံးစွဲသူတွေရဲ့အခြေအနေကို လေ့လာဆန်းစစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ပျမ်းမျှဝင်ငွေ၊ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း၊ လူဦးရေနဲ့ အခြား လူမှုအခြေအပြုအချက်အလက်တွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီး သတ်မှတ်နယ်မြေရဲ့ ၀ယ်ယူသုံးစွဲနိုင်စွမ်းကို ခန့်မှန်းပါ။ သင်ရောင်းချမယ့် ထုတ်ကုန်၊ ၀န်ဆောင်မှုနဲ့ အလားတူ ထုတ်ကုန်၊ ၀န်ဆောင်မှုတွေရဲ့ လက်ရှိရောင်းအားကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သတ်မှတ်နယ်မြေအတွင်းမှာ သင်ရရှိနိုင်တဲ့ ရောင်းအားကို ခန့်မှန်းပါ။
၃။ လုပ်ငန်းတူပြိုင်ဘက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နဲ့ သုံးစွဲသူဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို သုတေသနလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကို အထင်အရှားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကို ဘယ်တော့မှ လျှော့မတွက်မိပါစေနဲ့။ နောက်ထပ် ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေရော လက်ရှိပြိုင်ဘက်တွေကိုပါ သတိထားစောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ အရေအတွက်ကို အကဲဖြတ်ပါ။ သူတို့ရဲ့နည်းဗျူဟာနဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို လေ့လာပါ။ သင့်ရဲ့လေ့လာစိစစ်မှုက ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေကိုပါ မြင်သာလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ဘက်တွေကို လေ့လာဖို့ ရနိုင်သမျှ အရင်းအမြစ်တွေကို အသုံးချပါ။
သငျ့မှာ စီးပှားရေးလုပျငနျးတဈခု လုပျဆောငျဖို့ စိတျကူးကောငျးတဈခု ရှိတယျဆိုပါစို့။ ဒီစိတျကူးကလညျး သုံးစှဲသူတှရေဲ့ စိတျနှလုံးကို ဆှဲဆောငျနိုငျရုံသာမက အိတျထဲကပိုကျဆံတှကေို ထုတျသုံးခငျြစိတျပျေါလာလောကျအောငျ ကောငျးနပွေီ။ ဘယျသူမမပေးသေးတဲ့ ဝနျဆောငျမှုတဈခုခု ဒါမှမဟုတျရငျလညျး သုံးစှဲသူတှကွေားထဲမှာ လိုအပျခကျြတဈခုဖွဈနမေယျ ဆိုရငျ ဒါဟာ သငျ့ရဲ့အခှငျ့အလမျးပါပဲ။ တုံ့ဆိုငျးမနပေါနဲ့၊ လုပျစရာရှိတာ လုပျခလြိုကျပါ။
ဒါပမေယျ့ စဉျးစားစရာတဈခုရှိပါတယျ။ လုပျငနျးကို စတငျတညျထောငျဖို့ မကွိုးစားခငျမှာ သငျ့ရဲ့ထုတျကုနျ ဒါမှမဟုတျ ဝနျဆောငျမှုအတှကျ ဈေးကှကျရှိမရှိဆိုတာကို ဆုံးဖွတျရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါတငျမဟုတျသေးပါဘူး။ ဈေးကှကျထဲမှာ နရောရဖို့ ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတာကိုလညျး သခြောသိဖို့လိုပါတယျ။ ဒီအတှကျ ဈေးကှကျသုတသေနလုပျဆောငျဖို့ မဖွဈမနလေိုအပျပါတယျ။
စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျအမြားစုက ထုတျကုနျ ဒါမှမဟုတျ ဝနျဆောငျမှုတဈခုကို ထုတျလုပျရောငျးခတြဲ့အခါမှာ ဒီအဆငျ့ကို လဈလြူရှုထားတတျကွပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ထုတျကုနျ၊ ဝနျဆောငျမှုက အကောငျးဆုံးဖွဈနပွေီလို့ ယူဆထားတတျကွပွီး မကောငျးမွငျ ဝဖေနျအကွံပွုခကျြတှကေို လကျခံခငျြတတျတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ တခြို့ လုပျငနျးရှငျတှကေတြော့လညျး ဈေးကှကျသုတသေနလုပျရတာက အကုနျအကမြားမှာကို စိုးရိမျပွီး မလုပျပဲ နတေတျကွပါတယျ။ လုပျငနျးစတငျတညျထောငျရာမှာ ကုနျကမြယျ့ အခွားကုနျကစြရိတျတှလေညျးရှိတဲ့အတှကျ ဈေးကှကျသုတသေနလုပျဖို့ကို လဈလြူရှုတတျကွတာဖွဈပါတယျ။
တကယျတော့ ဈေးကှကျသုတသေနလုပျဆောငျမှုကို အနာဂတျရငျးနှီးမွုပျနှံမှုတဈခုအဖွဈ မှတျယူသငျ့ပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ထုတျကုနျ၊ ဝနျဆောငျမှုကို သုတသေနရလဒျနဲ့အညီ ထိနျးညှိလုပျဆောငျခွငျးက ရရှေညျမှာ ငှကွေေးခြှတောပေးနိုငျပါတယျ။
ဒါဆိုရငျ ဈေးကှကျ သုတသေန ဆိုတာက ဘာလဲ ? လှယျလှယျပွောရရငျ ဖွဈနိုငျခရြှေိတဲ့ ဈေးကှကျပွဿနာတှကေို ရှောငျရှား၊ ဖွရှေငျးနိုငျဖို့ လိုအပျတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှေ စုစညျးတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဈေးကှကျသုတသေနကောငျးတဈခုက အလုပျဖွဈစနေိုငျမယျ့ ဈေးကှကျရှာဖှရေေး အစီအစဉျကောငျးတဈခုရေးဆှဲနိုငျဖို့ လိုအပျတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှေ ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျပါတယျ။ ဈေးကှကျထဲမှာ သငျရညျရှယျဖွနျ့ဖွူးခငျြတဲ့ အပိုငျးတှကေို အတိအကသြိရှိလာဖို့နဲ့ သငျ့ရဲ့ထုတျကုနျ၊ ဝနျဆောငျမှုက ပွိုငျဘကျတှနေဲ့ ကှဲပွားခွားနားတဲ့ပုံရိပျဖနျတီးနိုငျဖို့ကိုလညျး အထောကျအကူဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သငျ့ရဲ့လုပျငနျးအသဈစကျစကျလေးကို စတငျအခွစေိုကျတညျထောငျဖို့ နရောကောငျးကို ရှေးခယျြနိုငျဖို့လညျး ကူညီပေးပါတယျ။
ဒီတော့ သငျ့လုပျငနျးအတှကျ ဈေးကှကျ ဆနျးစဈမှုလုပျဆောငျတော့မယျဆိုရငျ အောကျပါအခကျြတှကေို သိလာမှ ထိရောကျမှုရှိတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
၁။ လုပျငနျးနယျပယျဆိုငျရာ သတငျးအခကျြအလကျမြား
လုပျငနျးနယျပယျတဈခုကို ဆနျးစဈပွီဆိုရငျ နောကျဆုံးဖွဈနိုငျခတြှေေ၊ အပွောငျးအလဲတှကေို ရှာဖှပေါ။ သကျဆိုငျရာနယျပယျအတှငျးက စာရငျးဇယားတှေ၊ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုတှကေို နှိုငျးယှဉျကွညျ့ပါ။ လုပျငနျးနယျပယျရဲ့ ဘယျအပိုငျးက ဖှံ့ဖွိုးလာနပွေီး ဘယျအပိုငျးက ကဆြငျးနလေဲဆိုတာကို ကွညျ့ပါ။ သုံးစှဲသူ ပုံစံသဈတှေ ရှိနပွေီလား၊ နညျးပညာပိုငျးဆိုငျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုတှရေဲ့ သကျရောကျမှုတှကေ ဘာတှလေဲ၊ ဘယျလို အသုံးခနြိုငျမလဲ၊ သငျလုပျဆောငျမယျ့ လုပျငနျးနယျပယျက တိုးတကျမှုကဆြငျးနလေို့တော့ မဖွဈပါဘူး။
၂။ သုံးစှဲသူဆိုငျရာ အခကျြအလကျမြား
သုံးစှဲသူနဲ့ ပတျသကျလို့ကတော့ သငျ့ရဲ့ဈေးကှကျသုတသေနကို ဈေးကှကျစဈတမျးနဲ့ အစပွုသငျ့ပါတယျ။ စစေ့ပျသခြောတဲ့ ဈေးကှကျစဈတမျးကောကျယူမှုက လုပျငနျးအသဈတှအေတှကျ အရောငျးပိုငျးကို အထောကျအကူဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ဈေးကှကျစဈတမျးကောကျယူဖို့အတှကျ သငျရညျရှယျထားတဲ့ ဈေးကှကျအတှကျ ကနျ့သတျခကျြတှနေဲ့ နယျနိမိတျတှသေတျမှတျရမှာဖွဈပါတယျ။ ပွီးရငျတော့ သတျမှတျထားတဲ့ ကနျ့သတျနယျမွအေတှငျးက သုံးစှဲသူတှရေဲ့အခွအေနကေို လလေ့ာဆနျးစဈရမှာ ဖွဈပါတယျ။ သုံးစှဲသူတှရေဲ့ ပမျြးမြှဝငျငှေ၊ အလုပျလကျမဲ့နှုနျး၊ လူဦးရနေဲ့ အခွား လူမှုအခွအေပွုအခကျြအလကျတှပေျေါမှာ အခွခေံပွီး သတျမှတျနယျမွရေဲ့ ဝယျယူသုံးစှဲနိုငျစှမျးကို ခနျ့မှနျးပါ။ သငျရောငျးခမြယျ့ ထုတျကုနျ၊ ဝနျဆောငျမှုနဲ့ အလားတူ ထုတျကုနျ၊ ဝနျဆောငျမှုတှရေဲ့ လကျရှိရောငျးအားကို ဆုံးဖွတျပါ။ နောကျဆုံးအနနေဲ့ သတျမှတျနယျမွအေတှငျးမှာ သငျရရှိနိုငျတဲ့ ရောငျးအားကို ခနျ့မှနျးပါ။
၃။ လုပျငနျးတူပွိုငျဘကျဆိုငျရာ အခကျြအလကျမြား
လုပျငနျးနယျပယျနဲ့ သုံးစှဲသူဆိုငျရာ အခကျြအလကျတှကေို သုတသေနလုပျပွီးတဲ့အခါမှာ သငျ့ရဲ့ပွိုငျဘကျတှကေို အထငျအရှားတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ သူတို့ကို ဘယျတော့မှ လြှော့မတှကျမိပါစနေဲ့။ နောကျထပျ ပျေါလာနိုငျတဲ့ ပွိုငျဘကျတှရေော လကျရှိပွိုငျဘကျတှကေိုပါ သတိထားစောငျ့ကွညျ့ရမှာ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိပွိုငျဘကျတှရေဲ့ အရအေတှကျကို အကဲဖွတျပါ။ သူတို့ရဲ့နညျးဗြူဟာနဲ့ လုပျငနျးလညျပတျမှုကို လလေ့ာပါ။ သငျ့ရဲ့လလေ့ာစိစဈမှုက ဖွဈလာနိုငျခရြှေိတဲ့ အခကျအခဲတှေ၊ အခှငျ့အလမျးတှနေဲ့ ပွိုငျဘကျတှရေဲ့ အားနညျးခကျြ၊ အားသာခကျြတှကေိုပါ မွငျသာလာစမှောဖွဈပါတယျ။ ပွိုငျဘကျတှကေို လလေ့ာဖို့ ရနိုငျသမြှ အရငျးအမွဈတှကေို အသုံးခပြါ။
Previous: သ၀န်တိုစိတ်ကို လျှော့ချပြီး သဘောထားကြီးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း (၇)ခု
Next: အလှဆုံးမိန်းကလေးတွေမှာ ဘာ့ကြောင့်ရည်းစားမရှိတာလဲ